चिनले ओलीको सातो लिएपछी रातारात भयो यस्तो कार्य !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
चिनले ओलीको सातो लिएपछी रातारात भयो यस्तो कार्य !
काठमाडौं – विकास, समृद्धि र सुशासनको नारा दिइरहेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनको आदेश पालना गरेका छन्।
ओलीले बेइजिङको आदेशमा नेपालमा पक्राउ परेका चिनियाँ नक्कली डाक्टरलाई विनाशर्त छोड्न लगाएका हुन्। यसका लागि ओलीले बालुवाटारबाटै फोनमार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो।
महिना दिन अगाडि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले विभिन्न देशका नक्कली डाक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। जसमा चिनियाँ पनि थिए। चिनियाहरुलाई कारवाही नगरी सिधै छोडिएको स्रोतको दाबी छ।
भ्रष्टाचार नसहने, सुशासन कायम गर्ने नारा प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार दिइरहेपनि व्यवहार भने छिमेकी देशका ‘अपराधी’लाई संरक्षण दिइरहेका छन्। यसले चिनियाहरुमा समेत नेपालमा संरक्षण पाइने बुझाइ पर्न गएको बताइन्छ। जसका कारण कानून विपरित अनुमति विना विभिन्न क्रियाकलाप चिनियाहरुले गर्दै आएका छन्।
यसलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो ओली सरकार संरक्षण दिइरहेको छ।